Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny seranam-piaramanidina London Gatwick dia amidy 2.9 Miliara Pounds anglisy
Ny seranam-piaramanidina faharoa lehibe indrindra any Angletera, ny seranam-piaramanidin'i London Gatwick dia namidy tamin'i Vinci any Frantsa tamin'ny vidiny 2.9 miliara. Araka ny fe-potoana nifanarahana, ny kaonsortium tarihin'ny tahirim-bola amerikanina Global Infrastructure Partners (GIP) dia hivarotra tombony 50.01% amin'ny Vinci Airport.
Vinci miasa amin'ny seranam-piaramanidina 40 mahery manerantany manerana an'i Eropa, Azia ary Amerika. Anisan'ny portfolio-dry zareo Tokyo Kansai, Osaka, Santiago de Chile ary seranam-piaramanidina lehibe maro any Frantsa, Phnomh Penh, ary Lisbon.
Gatwick no seranam-piaramanidina fahavalo be indrindra any Eropa araka ny isan'ny mpandeha.
Michael McGhee, mpiara-miasa amin'ny GIP, dia nilaza hoe: "Manantena izahay fa ho vita amin'ny antenatenan'ny taona ho avy izao ny fifampiraharahana, ary hijanona eo amin'ny toerany ireo ekipa mpitarika ambony. Ny consortium GIP dia mahazo an'i Gatwick tamin'ny taona 2009 ho an'ny £ 1.5 miliara.
Ny ekipa tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Gatwick dia hijanona amin'ny fanarahana ny fifanarahana, miaraka amin'ny filoha Sir David Higgins, ny filoha exew Stewart Wingate, ary ny lehiben'ny vola Nick Dunn izay manohy ny andraikiny.
Ny GIP dia hanohy hitantana ny tombana 49.99% sisa ao Gatwick aorian'ny fikatonan'ny fifanakalozana amin'ny telovolana faharoa.
Nicolas Notebaert, filohan'ny Vinci Airport, dia nilaza hoe: "Amin'ny maha mpiara-miombon'antoka vaovao an'i Gatwick, Vinci Airport dia hanohana sy hamporisika ny fitomboan'ny fifamoivoizana, ny fahombiazan'ny asa ary hampiasa ny fahaizany iraisam-pirenena amin'ny fampiroboroboana ireo hetsika ara-barotra hanatsarana bebe kokoa ny fahafaham-po sy ny traikefa an'ny mpandeha.